ကားပေါ်မှဆင်းစဉ် အမည်မသိ ယာဉ်အမျိုးအစားမသိ မော်တော်ယာဉ် ဝင်ရောက်တိုက်မိပြီး ထွက်ပြေးသွားမှု – WunYan
ကားပေါ်မှဆင်းစဉ် အမည်မသိ ယာဉ်အမျိုးအစားမသိ မော်တော်ယာဉ် ဝင်ရောက်တိုက်မိပြီး ထွက်ပြေးသွားမှု
ဧပြီလ(၁၃)ရက်နေ့ နံနက်(၀၆:၀၀)နာရီအချိ အချိန် ရန်ကုန်-နေပြည်တော် လမ်းမိုင်တိုင်အမှတ် ၁၇၂/၂အနီးတွင် ယာဉ်မောင်းကိုအောင်ဝင်းထွန်း(၃၇)နှစ် မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်နေ သူမောင်းနှင်လာသည့်ယာဉ်အမှတ် YGN-5M/9—CARAVAN အဖြူရောင်ယာဉ်သည်ကားတာယာ အသံထွက်လာ၍ယာဉ်အားလမ်းဘေး ချရပ်ပြီး ယာဉ်ပေါ်ပါခရီးသည်ကို ဝင်းမြင့်အောင်(၄၂)နှစ် ကားပေါ်မှဆင်းစဉ်
အမည်မသိ ယာဉ်အမျီုးအစားမသိ မော်တော်ယာဉ်ဝင်ရောက်တိုက်မိပြီး ထွက်ပြေးသွားကြောင်း သိရှိရသဖြင့် အမြန်လမ်းမကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ သာဂရစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ကူညီဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ကိုဝင်းမြင့်အောင်တွင်ဦးခေါင်းသွေးထွက်ဒဏ်ရာရှိသဖြင့် တပ်ဖွဲ့ပိုင်မော်တော်ယာဉ်ဖြင့်ဆွာဆေးရုံပို့ဆောင်ထားရှီပါသည်။
တိုက်ပြေးသွားသည့် ယာဉ်အား ပိတ်ဆို့တားဆီး ရှာဖွေရာအခင်းဖြစ်စဉ်ဝင်ရောက်တိုက်မိသည့် မော်တော်ယာဉ်အမှတ်. MGY 9N/1198 အဖြူရောင်မော်တော်ယာဉ်အား မသင်္ကာဖွယ်တွေ့ရှိရသဖြင့် အမြန်လမ်းမကြီးရဲတပ်ဖွဲ့သာဂရစခန်းမှ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
Source : အမြန်လမ်းမကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး
ကားပျေါမှဆငျးစဉျ အမညျမသိ ယာဉျအမြိုးအစားမသိ မျောတျောယာဉျ ဝငျရောကျတိုကျမိပွီး ထှကျပွေးသှားမှု
ဧပွီလ(၁၃)ရကျနေ့ နံနကျ(၀၆၀၀)နာရီအခြိ အခြိနျ ရနျကုနျ-နပွေညျတျော လမျးမိုငျတိုငျအမှတျ ၁၇၂/၂အနီးတှငျ ယာဉျမောငျးကိုအောငျဝငျးထှနျး(၃၇)နှဈ မွောကျဥက်ကလာပမွို့နယျနေ သူမောငျးနှငျလာသညျ့ယာဉျအမှတျ YGN-5M/9—CARAVAN အဖွူရောငျယာဉျသညျကားတာယာ အသံထှကျလာ၍ယာဉျအားလမျးဘေး ခရြပျပွီး ယာဉျပျေါပါခရီးသညျကို ဝငျးမွငျ့အောငျ(၄၂)နှဈ ကားပျေါမှဆငျးစဉျ
အမညျမသိ ယာဉျအမြီုးအစားမသိ မျောတျောယာဉျဝငျရောကျတိုကျမိပွီး ထှကျပွေးသှားကွောငျး သိရှိရသဖွငျ့ အမွနျလမျးမကွီးရဲတပျဖှဲ့ သာဂရစခနျးမှ တပျဖှဲ့ဝငျမြား ကူညီဆောငျရှကျလကျြရှိပွီး ကိုဝငျးမွငျ့အောငျတှငျဦးခေါငျးသှေးထှကျဒဏျရာရှိသဖွငျ့ တပျဖှဲ့ပိုငျမျောတျောယာဉျဖွငျ့ဆှာဆေးရုံပို့ဆောငျထားရှီပါသညျ။
တိုကျပွေးသှားသညျ့ ယာဉျအား ပိတျဆို့တားဆီး ရှာဖှရောအခငျးဖွဈစဉျဝငျရောကျတိုကျမိသညျ့ မျောတျောယာဉျအမှတျ. MGY 9N/1198 အဖွူရောငျမျောတျောယာဉျအား မသင်ျကာဖှယျတှရှေိ့ရသဖွငျ့ အမွနျလမျးမကွီးရဲတပျဖှဲ့သာဂရစခနျးမှ စဈဆေးဆောငျရှကျလကျြရှိပါသညျ။
Source : အမွနျလမျးမကွီး ရဲတပျဖှဲ့မှူးရုံး